Alshabaab oo weli ku adkeysanysa inay si wadayan dagaalka | Mareergur.com	Wednesday, May 22nd, 2013	Home
Alshabaab oo weli ku adkeysanysa inay si wadayan dagaalka
Oct 17, 2012 - Comments off	Xilli Ururka Al-Shabaab lagala wareegay deegaano badan oo ku yaalo Gobalada dalka Soomaaliya ayaa weli waxa ay Al-Shabaab kusii adkeeysanayaan inay sii wadayaan dagaalka ay kula jiraan dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM.
Afhayeenka ciidamada Ururka Al-Shabaab C/casiis Abuu Muscab oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay inay sii wadayaan dagaal uu sheegay in Al-Shabaab ay xaq ugu dagaalamayaan.
Wuxuu sheegay in ilaa ciidamada AMISOM ay ka daalaan dagaalka oo dalka ay ka baxaan in Al-Shabaab aysan marnaba joojin doonin,ciidamada Shabaab ee dagaalka ku geeriyoodana ay yihiin kuwa Shihiid ah sida uu hadalka ku sheegay Abuu Muscab.
Afhayeenka Ciidamada Shabaab Cabdi Casiis Abuu Muscab ayaa sidoo kale sheegay in Gobolo kamid ah dalka Soomaaliya oo lagala wareegay halkaasi laga waayay ku dhaqanka Shareecada Islaamka isaga oo shacabka Gobaladaasina ugu baaqay inay beri ka ahaadaan ciidamada halkaasi jooga.
Al-Shabaab ayaa looga itaal roonaaday dagaalada ka socda Dalka Soomaaliya iyadoo lagala wareegay deegaano badan oo ku yaala Gobalada dalka Soomaaliya halkaasi oo ay maamuli jireen.